wona kanye umsuka izwi ibonisa ukuthi ubandlululo - uyinto oma phambi ingqondo, okungukuthi, ukuvimbela it kusuka uqhubekela phambili.
Uma indoda Ngaphuka ingalo yakhe, khona-ke, njengoba umthetho, ngokushesha ukuya kudokotela. Abangane ngisho abantu ezingajwayelekile oyozwelana naye, futhi mhlawumbe ngisho ukusiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo izinto ezidinga ezinye amakhono kokubili nemilenze engenhla. Nokho, akubona bonke izifo kubangele uzwela wakubeka kanjalo.
Ngo Ephakathi, emazweni ase-European baye bethukile: abantu abavamile nxazonke sizungezwe abathakathi. Ukujoyina kubo, kwanele ukuba izinwele abomvu, futhi ngezinye izikhathi nje ube wesifazane omuhle. Witch nje ukuhlolwa: ngentambo bese siphonswa emzimbeni eliseduze yamanzi. Uma empofu bentanta, ukuthi "kusobala" ukuthi - uyathakatha, ngakho isihloko sokuba ashiswe ephila ...
Phela, kwezinye izimo, abantu zigweme ukuthintana kulabo abahlukile kubo ezinye izinkundla kunalokho abstract? Ikakhulukazi uma lezi izici zobuntu kungukuthi ezihlobene kunokwenzeka ibhizinisi ngokuhlanganyela esizayo? Kusobala ukuthi kukhona kutsatsa luhlangotsi, kungabi ukuthi nobandlululo. It is onikezwe othile noma ngokuzithandela wamukela umbono, eyenziwa ngumuntu othize.
Kukhona into ezifana nokucwasa, okungukuthi ukwenqaba konke amasiko eyinqaba futhi imikhuba, futhi ngezinye izikhathi ukubukeka kwabantu kwamanye amazwe futhi amazwekazi. Nokho, kunezici eziningi kukhona ngamanga, nangesandla ukukhanya kwezinye umuntu engenamusa noma siyiziwula (noma mhlawumbe iqembu labantu) baba umphakathi obabheka ngayo. Eyeqisayo ubandlululo obenziwa kubantu bokufika olwenziwa cishe kuwo wonke amazwe, futhi udumo abanikazi nezinye abanebala lesikhumba noma ukubhekana nezinye izinhlobo ezithile kuhle ezimbi uhlamvu imfanelo noma ukuthambekela okungalungile, isibonelo, indlela yokuphila yisinanakazana. Ngakho, encwadini edumile inganekwane Evgeniya Shvartsa Archivist uyaqiniseka ukuthi Roma - lesizweni esesabekayo. Ngesikhathi esifanayo yena akekho kubo ayekubonile.
Izibonelo eziningi angabhekwa, futhi umkhankaso kwezinye republic ezwe elaliyi-USSR ngesikhathi nciphisa yayo, lapho abantu bomdabu lajula ukwazi ngale ndaba ka 'Abahlaseli esikhohlisayo ", ngaphandle owayedakiwe sekuyisikhathi ukuphuma ephethe ipotimende ngqo esiteshini.
Ngaphezu uhlanga noma isizwe, kukhona ubandlululo nomphakathi. Ikakhulu zivela maqondana labo abangamakhosi kwamanye amazinga nezicukuthwane. Ngokuvamile nenhlanhla ngaphezulu nabo takhamiti tibona mkhuba futhi ngezinye izikhathi inzondo, abampofu, noma labo abababheka njengabaphansi njengoba enjalo. Nokho, kwenzeka okuphambene nalokho futhi, uma noma yimuphi umuntu ngamabomu lempumelelo bakholwe scoundrel futhi isela. Ngezinye izikhathi lezi imizwa zidalwa osopolitiki, ngesisekelo ezinye izithakazelo zabo siqu.
Futhi omunye uhlobo noma ukuchema kuzo. Inkolelo-ze - kuyinto ukungabekezelelani maqondana abathi inkolo. Kuyinto mehluko ngokuvamile yimbangela ngezimpi Ngokuwa uthi echumayo kohlanga. Ngesisekelo okukhuthaza inzondo wakhonza amakhulu eminyaka ukwakha ubandlululo ukuthi umuntu akufanele abe nobunzima kakhulu ukuba bahoxe ekungeneleni enganakile.
Yiqiniso, akuzona zonke ukungabekezelelani kuyinto okuphambene. Kukhona amasiko nemikhuba ukuthi eziphikisana nemithetho yomphakathi ophucukile (isib, ubuzimu). Kodwa ingxenye ubandlululo kakhulu - lokhu iyisici kuyadabukisa kakhulu ebambezela kwandzisa lwati mutual amasiko nokuqonda mutual phakathi ezinjalo ezahlukene futhi njalo abantu bakhe amahle.
Incazelo Mikhulu abangophakimpi kwegama Sasha
Itshe Howlite: inani lesakhiwo, ukusetshenziswa
Uyini-elementi amaningi kakhulu endaweni yonke?